Nhanganyaya kuExcel uye basic mashandiro
Yakatumirwa ne Tranquillus | Apr 6, 2022 | Pamusoro pewebhu
Excel isoftware kubva kuExcel Microsoft, inosanganisirwa muOffice package. Nechirongwa ichi zvinokwanisika kugadzira uye kugadzira maspredishiti, anomiririra pakati pevamwe. Mutengo wekuita mapurojekiti ako, kuparadzira mari, kuongororwa kwegraphical. Pakati peakawanda mabasa aripo, kuvandudzwa kwemafomati otomatiki macalculation kunotendwa zvakanyanya. Zvese zvekuronga data uye kugadzirisa marudzi akasiyana emachati.
Excel inowanzoshandiswa kugadzirira, kunyanya:
Bhajeti, sekugadzira chirongwa chekutengesa semuenzaniso;
Accounting, pamwe nekunyengedza nzira dzekuverenga uye accounting zvirevo, sekuyerera kwemari uye purofiti;
Kuzivisa, kuyera kuita kweprojekiti uye kuongorora kusiyana kwemhedzisiro;
Invoice uye kutengesa. Kune manejimendi ekutengesa uye invoicing data, zvinokwanisika kufungidzira mafomu akachinjirwa kune chaiwo zvinodiwa;
Kuronga, kwekugadzira mapurojekiti ehunyanzvi uye zvirongwa, sekutsvaga kwekushambadzira pakati pevamwe;
Ndeapi maitiro ekutanga eExcel:
Kugadzirwa kwemabhuku ekushanda,
Kupinda kwedata uye otomatiki kuverenga mune spreadsheet,
Kudhinda pepa rekushanda.
Maitiro ekuita mamwe mabasa ekutanga muExcel?
Dzvanya pane Nyowani sarudzo uye wozosarudza matemplate aripo, anogona kunge ari: isina chinhu spreadsheet, default templates kana nyowani iripo templates.
Kugadzira bhuku rebasa, dzvanya iyo Faira sarudzo (iri pamusoro pemenyu), ichiteverwa neItsva. Sarudza iyo isina chinhu bhuku rebasa sarudzo. Iwe unozoona kuti gwaro rine mapepa matatu, nekudzvanya nebhatani rekurudyi rembeva, zvinokwanisika kubvisa kana kuisa mapepa akawanda sezvinodiwa.
Kutanga sarudza sero, tinya paSarudzo Yese sarudzo (iri pamusoro menyu), wobva wasarudza kubva paKumba tebhu, iyo Font sarudzo uye skira pasi kune iyo Border sarudzo, ikozvino unongoda kusarudza yaunoda maitiro.
Sarudza sero yaunoda uye mavara aunoda kugadzirisa. Enda kuKumba sarudzo, Font sub-chinhu, tinya Font Ruvara uye kutevedzana muTheme Colors.
Sarudza maseru ane mavara, tinya Kumba, wobva wadzvanya Alignment.
Sarudza sero raunoda kuchinja, enda kune yepamusoro menyu wobva wadzvanya Kumba, wozoenda kuboka reFont, wobva wadzvanya Zadza Ruvara. Vhura Theme Colors sarudzo uye sarudza yako yaunofarira ruvara.
Kuti uise data muExcel spreadsheet, ingosarudza sero uye nyora ruzivo, wobva wadzvanya ENTER kana, kana uchida, sarudza kiyi yeTAB kuti uende kune inotevera sero. Kuisa data nyowani mune imwe mutsara, tinya iyo ALT+ENTER musanganiswa.
Mushure mekupinda ruzivo rwese, kufomatisa spreadsheet uye magirafu nenzira yaidiwa, ngatienderere mberi nekudhinda gwaro. Kudhinda spreadsheet, sarudza sero rinoratidza. Dzvanya pane yepamusoro menyu "Faira" uye wobva wadzvanya paPrinta. Kana uchida, shandisa nzira yekudimbudzira keyboard, ndeye CTRL+P.
VERENGA Chibvumirano chekubatana chinopa mubhadharo wemubhadharo chinoshanda zvekare kune anodzingwa basa asati asainwa?
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve kushandiswa kweExcel work program, usazeze kuzvidzidzisa mahara nayo mavhidhiyo ehunyanzvi pane yedu saiti.
Nhanganyaya kuExcel uye basic mashandiro Kubvumbi 6th, 2022Tranquillus
pashureChii chinonzi Excel software?
zvinoteveraChinja chinzvimbo chemushandi kuti chienderane nemamiriro avo ezvinhu
Kuputsa fodya: mirayiridzo yekushandisa
Ita tsvagiridzo inoshanda uye yehunyanzvi yemusika
Hurema muripo wekufambisa rubatsiro